Xiaomi Redmi Note5(3GB RAM, 32GB ROM, 5.99 coliai), kaina nuo...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်းဖုန်းများ » စမတ်ဖုန်းများ » Xiaomi က Redmi5(3GB RAM ကို 32GB ROM ကို 5.99 လက်မ) မှတ်ချက်
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်ဖုန်းများXiaomi က Redmi5(3GB RAM ကို 32GB ROM ကို 5.99 လက်မ) မှတ်ချက်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇွန်လ 2019 20 6: 55
[HK Stock][Official Global Version]Xiaomi Redmi Note55.99 Inch Smartphone Snapdragon 636 3GB...
Xiaomi Redmi Note5Global Version 5.99inch " 4G Smartphone (3GB + 32GB 5mp / 12mp Snapdragon 636...
Xiaomi Redmi Note55.99 Inch Smartphone Snapdragon 636 Octa Core 3GB 32GB 5.0MP+12MP Dual Rear...
XIAOMI Redmi Note5- 32Go - Noir - Version Française
XIAOMI Redmi Note5- 64Go - Noir - Version Française
Xiaomi ကမှတ်ချက် Redmi5တစ်ဦး Phablet ကို features တွေအဖြစ် 5.99 လက်မ display ကို ဒါဟာသင်တစ်ဦးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်အတွေ့အကြုံကိုရရှိ။ သုံးဆကင်မရာများ, 12.0MP + 5.0MP dual-နောက်ကျောကင်မရာနှင့် 13.0MP ရှေ့ကင်မရာ, သငျသညျမွငျ့မား resolution နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပါအဝင်ကျွန်တော်တစ်ဦး Phablet ကိုထံမှမျှော်လင့်လာဖူးတဲ့ရဲ့ features အများစုကိုနှင့်တကွကြွလာ 3GB RAM နှင့် 32GB ROM ကိုသိုလှောင်မှု တပ်ဆင်ထား MIUI OS ကို9နှင့် 4000mAh သငျသညျပိုမြန်ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်မကြီးတွေစွမ်းရည်ဘက်ထရီ။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
display: လက်မ 5.99, 2160 1080 x ကို Pixel screen
System ကို: MIUI 9
RAM ကို + ROM ကို: 3GB RAM ကို + 32GB ROM ကို
ကင်မရာ: + မျက်နှာစာကင်မရာ 13.0MP 12.0MP + 5.0MP dual-ကင်မရာများပြန်
sensor: Proximity Sensor ကို, Accelerometer, ဂိုင်ရိုစကုပ်, E-သံလိုက်အိမ်မြှောင်, လက်ဗွေအာရုံခံ, Ambient light sensor, ခန်းမအာရုံခံ
SIM ကဒ်ကဒ်: dual SIM dual standby.2x Nano SIM card and 1 TF card can be inserted at the same time
feature ကို: GPS စနစ်, A-GPS စနစ်, GLONASS, ကြီးမှာ Beidou
ဘာသာစကား: နော်ဝေး, Nuasue, Nynorsk- အ, အဘိဓါန် Uzbek-, Olusoga, Oromoo, ပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, Pulaar, Rikpa, ရိုမေးနီးယား, Rukiga, Rumantsch, Runyankore, Sango-, Sena, Shqip, စလိုဗ, စလိုဗေးနီး, Soomaali, Srpski, ဖင်လန်, ဆှီဒငျ, Taqbaylit, Tasawaq Swnni, Thok Nath, ဗီယက်နမ်, Tshiluba, တူရကီ, Walser အနောက်-FRYSKO, Zarmaciine, ဂရိ, ဘူဂေးရီးယား, ခရူဂ, Kazakh-, စီဒိုနီယံ, လီး, ရုရှ, ဆားဗီးယူကရိနျးဂျြောဂြီယနျယူကရိနျး, ဟီဘရူး, ဒူ, အာရ, ပါရှနျ, ခြ, မာရသီ, နီပါလီ, ဟိန္ဒူ, ဘင်ျဂါလီ, Bengla ပနျခြာပီ, ဂူဂြာရ, တမီး, ဂု, ကန်နာဒါ, မလေးရာလ, ဆင်ဟာ, ထိုင်း, လာအို, မြန်မာ, ခမာ, ကိုးရီးယား, ဂျပန်, မျက်မှောက်ရေးရာ / ရိုးရာတရုတ်, အာဖရိက, Azerbaijani-, Aghem, Akan အဘိဓါန် , မလေး, Bamanakan, Bosanski, Brezhoneg, ဘာဆာ, ကာတာလ, ခကျြ, Chimakonde, ChiShona, Cymraeg, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, Dhola, Estonian အဘိဓါန်, Ekegusii, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, Euskara, Euegbe, Ewondo အဘိဓါန်, ဖိလစျ, ပြင်သစ်, Gaeilge, Gaelg, Galego , Gikuyu Haus, Hibena ခရိုအရှေ, Ichibemba, အစ်ဂဘို, Ikirundi, အငျဒိုနီးရှား, Ishisangu, isiNdebele ဆုံးရှုံး lu, လန်, kalenji, Joola, Kalaallisut အဘိဓါန်, အီတလီ, Kernewek, Khoekhoegowab, Kihorombo, Kikamba, Kimachame, Kinyarwanda-, ထင်းရူးပင်, Kiruwa, Kisampur, Kishambaa, Kiswahili, Kitaita, Kiteso, Kilaangi, Koyra Ciini, အံ, အာနီယံ, Luganda, Luluhia , Maa, Magyar, Maku, အာလာဂါစီ, မော်လ်တာ, ဒတျချြ
OS ကို: MIUI 9
ရမ်: 3GB RAM ကို
ROM ကို: 32GB
WIFI: 802.11a /b/ g / n / ac ကြိုးမဲ့အင်တာနက်
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု: 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi 3G, 4G, A-GPS စနစ်, Bluetooth Dual-Band, Wi-Fi, GPS ဂျီအက်စ်အမ်, Wi-Fi
screen အမျိုးအစား: capacitive
back-ကင်မရာ: 12.0MP + 5.0MP
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် (mAh ဘက်ထရီ): 4000mAh
SIM ကဒ်အပ်: 1
package အရွယ်အစား: 17.00 x ကို 9.21 x ကို 6.00 စင်တီမီတာ / 6.69 x ကို 3.63 x ကို 2.36 လက်မ
package အလေးချိန်: 0.3220 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 15.86 x ကို 7.54 x ကို 0.81 စင်တီမီတာ / 6.24 x ကို 2.97 x ကို 0.32 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 0.1810 ကီလိုဂရမ်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Xiaomi က Redmi5(3GB RAM ကို 32GB ROM ကို 5.99 လက်မ) မှတ်ချက်
ကုန်ပစ္စည်း Size ကို (L ကိုက x W x ကို H ကို)
X ကိုက x 16.10 7.90 0.90 စင်တီမီတာ x ကို 6.34 3.11 0.35 လက်မ x ကို
X ကိုက x 21.00 12.00 1.30 စင်တီမီတာ x ကို 8.27 4.72 0.51 လက်မ x ကို
Xiaomi Redmi Note5(3GB RAM, 32GB ROM, 5.99 coliai) Videos
အဘို့အ 354 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Xiaomi က Redmi5(3GB RAM ကို 32GB ROM ကို 5.99 လက်မ) မှတ်ချက်
4.95ထံမှ
Carlos Durán - ဇွန်လ 2019 11
Me gustó muchísimo, todos los agujeros encajan perfectamente.Cubre muy bien toda la pantalla y no es tan flexible como la que trae el teléfono de fábrica. Los detalles en azul hacen que resalte muchísimo en el color azul del teléfono. Da muy buen agarre y no se resbala. Muy contento con la compra! 🙂
FUNDA PROTECTORA PARA XIAOMI REDMI NOTE5- ဇွန်လ 2019 11
Calza perfecto en el teléfono.La parte transparente deja visualizar el acabado original del telefono.los bordes metalizados le dan un toque, ideal para mujer.
Xavier - ဇွန်လ 2019 11
ဂျွန် - ဇွန်လ 2019 11
LEAGOO KIICAA MIX ဖုန်းမှ (3GB RAM ကို, ROM ကို 32GB, 5.5 လက်မ)
Xiaomi က Redmi 4X ဖုန်းမှ (3GB RAM ကို, ROM ကို 32GB,5လက်မ)
Bluboo S8 ဖုန်းမှ (3GB RAM ကို, ROM ကို 32GB, 5.7 လက်မ)
SQ8 Mini ကို 1080P မှတ်ပုံတင်